5 Best Macmacaanka Local Si Isku day In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Best Macmacaanka Local Si Isku day In Europe
5 Best Macmacaanka Local Si Isku day In Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Danmark, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 25/01/2021)
macmacaanka Local ku yimaadaan noocyo badan oo dhan Europe. Waddan kasta iyo gobol ay dawayn yar u gaar ah waxay ku faraxsanahay in ay bixiyaan. Dalxiisayaasha la ilig macaan, Ma jiro wax ka badan qurxiyey oo ku saabsan safarka badan dhadhankii cusub. Halkan waxaa noo top 5 ugu wanaagsan ee macmacaanka maxaliga ah in ay isku dayaan in Europe.
1. A Sweet Local – Mozartkugel, Salzburg, Austria
Mid ka mid ah ugu caansan iyo macmacaanka degaanka caanka ah ee Europe waa Mozartkugel. Sida aan ognahay, Paul Furst abuuray recipe asalka ah ee Salzburg qarni kale ka hor. Waa israac ah shukulaatada dawayn la lows cagaaran iyo nougat.
Waxaa jira dhowr qeybood miisaaniyadda warshadaha-dhigay, oo waxaad ka heli kartaa dukaamada. Si kastaba ha ahaatee, version asalka ah ma aha qaali, oo waxaa haboon farqiga qiimaha. Guud ahaan, ay yihiin mid ka mid ah macmacaanka fiican deegaanka si ay guriga ka safarkaaga Austria keeno.
Munich in ay Tareenadu Salzburg
Salzburg in Passau
Vienna si ay Tareenadu Salzburg
2. A Sweet Local – donuts, Berlin, Germany
Ma aha in aad si xerin Carrabkaaga gunti inay sheegaan magaca this macaan degaanka. Dadka iyaga gaabin in Berliner ka baxsan Berlin, iyo canjeelada ee Berlin. Si ka duwan donuts American, iyaga oo aan haysan god ee xarunta. Marka aad raacdo karinayo dhaqanka, waxaad ka heli kubad delicious of macaan, buuxsamay meel saxmad ah ama Pomelos, la midda sonkorta.
Berlin si Tareenadu aabbo
Berlin si Tareenadu Hamburg
Berlin si Tareenadu Munich
3. stroopwafel, Amsterdam, Netherlands ayaa
stroopwafel waa mid ka mid ah macmacaanka degaanka ugu qabatimo mid ka heli kartaa in Europe. Si ka duwan macmacaanka kale oo badan, ma jiraan wax dood ah oo ku saabsan kuwaas oo asalkiisu ka soo jeedo karinayo iyo meesha. Duba magaalada Dutch ee Gouda marka hore iyaga ka dhigay. Maxaa yeelay, iyagu santuuq oo si fiican u safraan, inay sameeyaan qadiin ah u fiican.
Laba canjeero aan khafiif ah isu keenay la karamell "xabagta" inaad mid Stroopwafel. Inkasta oo aanu ka dhawaajin gaar ah, racfaanka universal iyaga ka dhigaysa mid ka mid ah macmacaanka fiican degaanka. macmacaanka waxay ka dhigi a cunto fudud kaamil ah ka dib maalin dheer ee tareenka-bootimaalaysiga, shopping, iyo baaskiil soo gebgabeeyay doodihii - dhammaan hawlaha caadiga ah Amsterdam.
4. cajiin Danish, Copenhagen, Denmark
Inkastoo Danmark waa yar yahay, ka Warkii ay macmacaanka fiican maxaliga ah u safro meel fog oo ballaaran. cajiin Danish safray Denmark leh koox ka mid ah kuwo kibista duba Austria. Dabcan, waxay dib u habaynta karinayo sanadihii la soo dhaafay, iyo muhaajiriinta badan Scandinavian keeneen America. Si kastaba ha ahaatee, aad ku raaxaysan doonaa ugu badan ee dalka halkaasoo ay ku dubi jiray heegan ugu taamyeelay.
Tani maxaliga ah ee deenishka macaan waa mid ka mid ah waxyaalaha daaraysaa aad dhadhamin doonaan. dubi jiray waxay hogaanka off la jam, cheese, ama labeen ah si ay nooga in kartina Scandinavian kaamil ah. Inkasta oo ay tahay hodan ku dhadhan iyo calories, ka dib markii maalin ka mid ah sahaminta Copenhagen barafka, labada sifooyinkaasi aad ku raaxaysan doonaa.
5. Cuberdon, Belgium
Cuberdon waa mid ka mid ah macmacaanka ugu fiican oo ugu dahsoon maxaliga ah ee Europe. Waa hat-qaabeeya, inta badan guduud, iyo la buux miro guduud buuxiyey. Marka idin qaniini mid, ilkaha galeen dhexe jilicsan buuxinta fudayd. Waxay inta badan u wac Belgium fiican-qarsoodi. Sababtoo ah waa adag tahay in la badbaadin dhowr toddobaad ka dib, waxay Don aan inta badan waxa ay dhoofiso. Si kastaba ha ahaatee, waayo dalxiis oo doonaya in ay isku dayaan wax gaar ah oo guriga u keenaan, cuberdon waa kaamil.
Ma rabtaa in aad ku darto qaar ka mid ah oo sonkor ah iyo uunsigii galay noloshaada iyo tareenka a cuntada safar iyada oo Europe? Jartaan tikidhka Your Maanta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Macmacaanka Local Si Isku day In Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-local-sweets-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Denmark #macmacaanka shukulaatada eurotrip travelaustria travelbelgium travelgermany travelnetherlands
Industrial Engineering, Safarka tareenka, safarka Europe